नेतृत्वमा बासी अनुहारहरु भएमा जनतासँग टुटेको समबन्ध जोडिँदैन : थापा | www.24nepal.com
नेतृत्वमा बासी अनुहारहरु भएमा जनतासँग टुटेको समबन्ध जोडिँदैन : थापा
उहाँहरुले पेलेर लानुभयो भने दुई बर्षपछि त महाधिवेशन छँदैछ’
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा काठमाडौं ४ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित गगन थापा पार्टीभित्र वैचारिक दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न मात्र होइन, पार्टी र राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा खरो टिप्पणी गर्ने नेता मानिन्छन् ।
यही नेतृत्वबाट कांग्रेस सशक्त पार्टी बन्ला र ?
कतिपयलाई तीतो लाग्न सक्छ, पार्टी नेतृत्वमा यिनै बासी अनुहारहरु भएमा जनतासँग टुटेको जुन समबन्ध छ, त्यो जोडिँदैन ।
हाम्रा केही साथीहरु नेतृत्व भनेको उमेरले हुँदैन, एजेन्डा चाहिन्छ भनिरहेका छन् । यसमा दुईमत छैन । तर, नेतृत्व भनेको रातारात बन्ने पनि होइन । एकपटक नेतृत्वका बारेमा बनेको धारणा रातारात बदलिने पनि होइन ।
कांग्रेसका मुख्य मुख्य नेताहरुका बारेमा आमजनताले जस्तो धारणा बनाएका छन्, त्यो हामीले बनाईदिएको होइन । त्यो धारणा अब बन्यो, बन्यो । त्यसैले यस्तो अप्ठ्यारो बेलामा यही नेतृत्वले कांग्रेसलाई माथि उठाउन सक्दैन ।
यो कठोर कुरा होला तर, यसलाई कांग्रेसजनले मान्नै पर्छ । होइन हामी आफ्नै नाफा-घाटाको हिसाब गरेर बस्ने हो भने बेग्लै कुरा हो
यसपटकको निर्वाचनमा एमालेले पाएको कुल मतभन्दा ४० हजार मत मात्र कांग्रेसले कम पाएको, यसमा आत्तिनुपर्ने कुरा केही छैन भन्छ त तपाईंको नेतृत्व । कुनै टिप्पणी ?
हामीले एमालेको भन्दा ४० हजार मत कम पाएको होइन । हामीले नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) भन्दा २२ सिट बढी पाएका हौं । आजका दिनमा नेपाली कांग्रेस पार्टी भनेको नेमकिपाभन्दा २२ सिट बढी भएको पार्टी हो ।
पार्टी नयाँ पुस्तामा कसरी हस्तान्तरण होला त ?
हाम्रा नेताहरुमा अझ पनि डर, लोभ र हिचकिचाहट देखिन्छ । यसविरुद्ध हामी बोल्नैपर्छ । उहाँहरुलाई आदर गरौं, मान सम्मान गरौं तर, पार्टीको मूल्यमा होइन ।
म पुस्ताको कुरा गर्दिनँ । कांग्रेसभित्र एउटा उमेरको नेता काबिल, अर्को उमेरको नेता बेकाबिल भन्ने कुरा न वैज्ञानिक हुन्छ, न त त्यसले हामीलाई कहीँ पुर्याउँछ ।
हाम्रो पार्टीभित्र नेताहरुको यस्तो समूह छ, जो २०४६ सालदेखि पार्टीको मुख्य मुख्य स्थानमा हुनुहुन्छ । सरकारमा बसेर काम गर्न पाउनुभएको छ । उहाँहरु ‘एक्जहस्टेड’ हुनुहुन्छ, थाकिसक्नुभएको छ । उहाँहरु ‘एक्सपोस्ज्ड’ पनि भइसक्नुभएको छ । उहाँहरुको सीमा जनतालाई थाहा छ ।
जतिसुकै लोलोपोतो गरे पनि अब हामी नयाँ रङ लगाइदिन सक्दैनौँ । फेरि पनि हामीले उहाँहरुलाई नै जिम्मेवारी दिन थाल्यौँ भने पार्टी त जसोतसो चल्ला तर जनतासँग बढेको दूरी मेटिँदैन ।
तपाईं स्वमंले पनि पार्टीको नेतृत्वको दाबी गरिरहनुभएको छ, होइन ?
हामीले माहौल बनाउन खोजिरहेका छौँ । हामीले हाम्रो ‘स्टेटमेन्ट’ भनिरहेका हौँ । उहाँहरुलाई पार्टीको नेतृत्व पंक्तिबाट छोडाउने अब हाम्रो कोसिस हुन्छ नै । अहिले पार्टी सभापतिलगायत वरिष्ठ नेताहरु जो जो हुनुहन्छ, उहाँहरुलाई अब तपाईंहरु पार्टीको नेतृत्व पंक्तिमा रहिरहनु हुँदेन भनेर विनीत भएर आग्रह गरिरहेका छौँ । यसका लागि मैले आफूले सक्ने सबै काम गर्छु भनेको हो ।
नेतृत्वलाई यसरी चुनौती दिनेको संख्या पार्टीमा कति नै छ र ?
हो, यो संख्या थोरै भयो भने यही नेतृत्व रहिरहनुहुन्छ, पार्टीलाई थप क्षति हुन्छ । अब अरु साथी पनि यसका लागि तयार हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न मुख्य हो । निवेदन दिएर वा मागेर हुने कुरै होइन यो ।
पार्टी नेतृत्वमा रहेकाहरुलाई अब अभिभावकका रुपमा बस्नूस् भनेर भन्ने बेला आयो । उहाँहरुलाई ‘ग्रेसफुल एक्जिट’ नै गरौँ, चाहे त्यो विशेष महाधिवेशनबाट होस् । त्यहाँ उहाँहरुले पेलेर लानुभयो भने आगामी दुईबर्षपछि त महाधिवेशन छँदैछ ।नेपाल साप्ताहिक बाट
प्रकशित मिति : 2018-02-18
उदयपुरको बेल्टार व्यापारिक दृष्टिकोणले पुरानो बजारको रुपमा लिन सकिन्छ